11 May 2021 | मंगलबार, २८ बैशाख, २०७८ | Edition : Nepal | UK | Australia
बार्यन म्युनिखले लगातार नवौँ पटक उचाल्यो बुन्डेस लिगाको ट्रफी
एजेन्सी । यो सिजनको जर्मन फुटबल लिग बुन्डेसलिगाको उपाधि बायर्न म्युनिखले जितेको छ । विस्तृतमा
हत्या घटनाका आरोपी पहलवान सुशिल कुमारविरुद्ध 'लुकआउट सर्कुलर'
मिलानविरुद्ध आफ्नै मैदानमा युभेन्ट्सको लज्जास्पद हार
ला लिगा उपाधि होड थप रोमाञ्चक, सेभिया र रियल मड्रिडले बराबरी खेले
सर्जियो अगुइरोले माफी मागे
ला लिगा उपाधि दौडः एट्लेटिकोलाई बार्सिलोनाले बराबरीमा रोकेपछि रियल मड्रिडलाई फाइदा
लिभरपुलको झिनो आशा !
म्यान्चेस्टर सिटी चेल्सीसँग पराजित
आइसिसीको बरियतामा पारस, शरद, सोमपाल र वसन्त
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) को टी–२० क्रिकेटको नयाँ बरियतामा नेपालका चार खेलाडी समावेश भएका छन् । आइसिसीले बुधबार राति सार्वजनिक गरेको नयाँ बरियतामा नेपालका दुई ब्याट्सम्यान र दुई बलर बरियतामा पर्न सफल भएका हुन् ।
आजबाट ‘राइनो संरक्षण गोल्डकप’
कावासोती, कात्तिक । दुर्लभ एकसिङ्गे गैडाँ संरक्षणको सन्देश दिन १५ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको ‘राइनो संरक्षण गोल्डकप’ आजबाट नवलपरासी पूर्व नवलपुरको मध्यविन्दु नगरपालिकामा शुरु हुँदैछ ।
रोनाल्डोबिनाको रियल संकटमा, विकल्प हुनसक्छन् यी खेलाडीहरु
काठमाडौँ । नौ वर्ष रियल मड्रिडमा बिताएपछि स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले रियल मड्रिड छोड्ने निर्णय गरे । धेरै फ्यानहरुलाई लागेको थियो कि उनी रियलबाटै सन्यास लिनेछन् तर
पिपिएलमा चितवन राइनोजको पहिलो जित
पोखारा । पोखरा प्रिमियर लिगमा टी–२० क्रिकेट प्रतियोगितामा एक्पर्ट धनगढी बुल्जलाई चितवन राइनोजले १ सय २६ फराकिलो रनले पराजित गरेको छ।
बलोन डी’ओर अवार्ड आफूले पाउनुपर्ने रोनाल्डोको तर्क
काठमाडौ । इटाललियन फुटबल क्लब युभेन्ट्सका फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोले आफूले बलोन डी’ओर अवार्ड पाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । बलोन डी’ओरको आयोजक फ्रान्स फुटबलसँग कुरा गर्दै रोनाल्डोले आफू इतिहासको उत्कृष्ट मध्येको एक फुटबल खेलाडी भएको कारणले गर्दा बलोन डी’ओर अवार्ड आफूले पाउनुपर्ने तर्क गरेका हुन् ।
महरेजको गोलमा म्यान्चेस्टर सिटीले टोटनहमलाई हरायो
काठमाडौं । म्यान्चेस्टर सिटीले टोटनहमलाई उसैको घरेलु मैदानमा हराएको छ । सोमबार राति वेम्ब्लेमा सम्पन्न खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी रियल महरेजको एकमात्र गोलबाट विजयी भएको हो ।
रियल मड्रिडले प्रशिक्षक लोपेटेउईलाई बर्खास्त गर्यो
काठमाडौं । स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडले जुलेन लोपेटेउईलाई प्रशिक्षक पदबाट बर्खास्त गरेको छ । सोमबार बेलुकी बसेको रियलको बोर्ड बैठकले उनलाई हटाएको हो ।
एएफसी यु– १९ च्याम्पियनसिपमा उपविजेता बनेको राष्ट्रिय फुटबल टोली आज स्वदेश फर्कंदै
काठमाडौं । एएफसी यु–१९ च्याम्पियनसिपमा दोस्रोचरणका लागि छनोट भएको नेपालको महिला राष्ट्रिय फुटबल टोली आज स्वदेश फर्कंदैछ ।
अप्रिल महिनामा २२ हजार विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिए
काठमाडौँ । गत अप्रिल महिनामा नेपालमा २२ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन् । अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कअनुसार कोरोना महामारी र लामो समयको बन्दाबन्दीपछि नेपालमा सबैभन्दा धेरै पर्यटक अप्रिलमा नेपाल भित्रिएका हुन् ।
यसरी ल्याउनुस् छालामा चमक !
एजेन्सी । उमेर बढेसँगै अनुहारको छालापनि चाउरी पर्छ र तन्किन सुरु गर्छ । तर उमेर नपुग्दै छाला चाउरियो भने के गर्ने युवा अवस्थामा नै छाला चाउरी पर्न थाल्यो भने अनावश्यक र महंगो क्रिम र लोसनको सट्टा प्राकृतिक उपाय अपनाउनुपर्छ ।
सुखी दाम्पत्य जीवनको प्रमूख शुत्र !
कोरोना संक्रमण भएको दौरान र संक्रमण मुक्त भइरहँदा यी चीजहरु भुलेर पनि नखानुहोस्
चीनमा हालसम्म कति जनाले लगाए कोरोनाको खोप ?
एजेन्सी । चीनमा शुक्रवारसम्म ३० करोड ८० लाखभन्दा बढी व्यक्तिले कोभिड–१९ विरूद्धको खोप लिइसकेका राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले जनाएको छ ।
भड्काउ जीवनशैली अपनाउने कम्युनिष्ट पार्टीका नेतामाथि कारबाही
उत्तर प्रदेशमा कोरोनाका कारण एकै परिवारका पाँच जनाको मृत्यु
भुटानमा कति पुग्यो कोरोना संक्रमितको संख्या ?